Kungani ingane ibuhlungu emilenzeni?
Ukubeletha Impilo yezingane
Izingane ezincane zivame ukukhononda kubazali bezinhlungu ezingxenyeni ezingaphansi. Amama nobaba baqala ukukhathazeka kakhulu futhi bavame ukubonisana nodokotela ukuthola iseluleko. Noma kunjalo, ngezinye izikhathi izinzwa ezinjalo ezingavamile zichazwa ngokumane nje ngezici zobuntu zobuntwana, kanti kwezinye izimo zikhombisa ukuthi kukhona izifo ezithile.
Kulesi sihloko, sizokutshela ukuthi kungani ingane inemilenze ekhukhulayo, nokuthi yini okufanele uyenze kulokhu.
Izimbangela zezinhlungu zomlenze ezinganeni
Ezimweni eziningi, imilenze yengane encane iyalimala ngenxa yezizathu ezilandelayo:
Izici ezingokwemvelo zokuthuthukiswa kwengane ngokuvamile ziholele ekutheni izinyawo nezimpondo ziyokhula ngokushesha kunezinye izingxenye zamalungu angaphansi. Lapho kukhona ukukhula okunamandla kakhulu kwezicubu, kufanele kutholakale ukugeleza kwegazi okuningi. Izitsha ezondla amathambo nemisipha zibanzi ngokwanele ukuze zinikeze igazi ngezicubu ezikhulayo, kodwa ngaphambi kokuba zibe neminyaka engu-7-10 abanayo imfucuza eyanele. Lapho umntwana esebenza, ukujikeleza kwegazi kuthuthuka, futhi amathambo angakhula futhi athuthuke. Ngesikhathi sokulala, ithoni yemikhumbi iyancipha, okusho ukuthi amandla okugeleza kwegazi ancipha. Lesi yisona sizathu esiyinhloko esenza ingane inake izinyawo ebusuku.
Izinkinga ze-Orthopediki, njenge-scoliosis, ukuvuthwa komgogodla, izinyawo ezinjengezinyawo nezinye, ngokuvamile kubangela ubuhlungu nokungahambi kahle.
Ngaphezu kwalokho, ubuhlungu emilenzeni bungaphathelene nezifo ezithile ze- nasopharyngeal, isibonelo, i-tonsillitis noma i-adenoiditis.
Nge-dystonia ye-neurocirculatory , ingane ilimazwa kakhulu yimilenze ebusuku. Ngaphezu kwalokho, i-crumb ingase ihlupheke enhliziyweni noma endaweni yesisu, kanye nekhanda.
Ukulimala okuhlukahlukene , izivunguvungu, i-sprains ingabangela ubuhlungu endaweni yomlenze.
Ngokuvamile ubuhlungu endaweni yezinzwani buyinto yokukhohliswa ngesihluku.
Okokugcina, uma ingane engaphezu kweminyaka engu-3 ithi imilenze yakhe ilimaza phansi kwamadolo, ukudla kwakhe kufanele kubuyekezwe. Ngokuvamile, isizathu salesi simo ukungabi nokungena emzimbeni wezingane we- phosphorus ne- calcium. Ingane idinga ukudla izithelo nemifino eningi ngangokunokwenzeka, izinhlanzi ezimhlophe, inyama, izinkukhu kanye nemikhiqizo yobisi. Kungaba okungenakuqhathaniswa ukuthola isisindo samavithamini nama-microelements ezinganeni.
Uma le-crumb ikhathazekile kakhulu ngokungadluli ubuhlungu emilenzeni, kufanele uthintane nodokotela wezingane. Udokotela oqeqeshiwe, esebenza zonke izivivinyo ezidingekayo, uzokwazi ukusungula ukuxilongwa okufanele futhi anikeze ukwelashwa okudingekayo, kanye nokwelulekwa okwechwepheshe.
Ngimaphi izinga lokushisa okumelwe nginike lona ingane ye-febrifugal?
Kunokuba uphathe ingane i-rhinitis?
Ukudla nge-acetone ezinganeni
Izinkinga ngemuva kwezinkukhu ezinganeni
I-mononucleosis ezinganeni - ukwelashwa
Ingane inezinhlanzi emanzini
Ukutheleleka kwe-Cytomegalovirus ezinganeni - ukwelashwa
Kungani ingane inenkhanda?
Croup ezinganeni - izimpawu kanye nokwelapha
I-Cream yokushisa izingane
Imidwebo yezingane zeSuku Lokunqoba
Ama-arches for the garden
Yini i-manipura chakra ephendula ngayo?
I-toxemia ihlala isikhathi esingakanani ekukhulelwe?
Ungalingisa kanjani i-orgasm?
UDonald no-Ivanka Trump ohambweni lwebhizinisi baya e-Wisconsin
Ungathatha kanjani uDufaston ukuba akhulelwe?
Ungasusa kanjani isikhunta kusuka kumcubu?
Izitayela zezintsha ezintsha 2013
Ungasusa kanjani ukwesaba nokungaqiniseki?
Zingaki izinyanga engingafaka ingane?
Ukudla okuhle kittens
I-plaster yamahhashi kanye nama-fireplaces
Salo ngegalikhi ngokusebenzisa i-grinder yenyama - iresiphi
I-Psychic Anatoly Ledenev
I-Nephroptosis yezinso ezifanele